Fasalka Elite-ka La Sharaxay - Muuqaalka Cradle
Anime qoto dheer
by DIMA 13th November 2021 15th November 2021
Leave a Comment on Classroom Of The Elite Sharaxay
Classroom Of The Elite Anime waxa uu ahaa Anime caan ah oo asal ahaan soo baxay 12th Luulyo 2017. Anime-ku waxa uu ku salaysan yahay mangaga isla magaca kaas oo soo baxay horraantii 2016, ee Warshada Warshada Majaajilada Billaha ah ee Majaajilada. Anime-ka si wanaagsan baa loo soo dhaweeyay oo waxay mar hore ka hadlayeen Fasalka Xilliga Elite 2 mar haddii aan ku sii dhowaanayno 2022.
La tali inay jiraan qaswadayaal Qaybta u dambaysa ee Anime ee soo socota.
Dulmar - Fasalka Sare ee La Sharaxay
Anime-ku wuxuu ku bilaabmaa hal-ku-dhig yar oo ka socda MC Kiyotaka halkaas oo uu sheegay in aan qof walba si siman u dhalan. Waanu daboolnay Kiyotaka ee Fasalkayaga Xilliga Sare Maqaalka 2. Waxa uu hadda bilaabay sannadkiisii ​​ugu horreeyay ee dugsiga Dugsiga Sare ee barbaarinta halkaas oo kaliya ardayda aadka ugu fiican ee Japan ay tagi karaan.
Dugsiga Sare ee Xannaanada Sare - Fasalka Sare ee La Sharaxay
Dugsigu waxa uu ogolyahay waxa ugu wanagsan sababta oo ah ujeedada dhabta ah ee dugsigu waa in uu soo saaro xubnaha bulshada ugu wanagsan uguna waxtarka badan. Kuwaas oo kala ah: Siyaasiyiinta, Dhakhaatiirta, Bangiyada, iyo wixi la mida. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira qabasho. Dugsigu ma isticmaalo hababka wax-barida ee soo jireenka ah. Taa beddelkeeda, dugsigu wuxuu dooranayaa inuu isticmaalo habab badan oo aan caadi ahayn.
Maalinta ugu horeysa, waxaan runtii baraneynaa nidaamkan macalinka ahaan Kiyotaka's fasalka ayaa u sheega inta lagu jiro dhamaadka qaybta koowaad. Macalinku wuxuu sharxayaa in fasalada loo qaybiyay ilaa 4 fasal. Fasalka A, B, C, iyo D. Fasalada ayaa tilmaamaya heerka ay ardaydu yihiin marka loo eego khibradooda guud, garaadka, iyo xirfadahooda xalinta mashaakilaadka. Dhammaantood waa la doortay oo waa la waafajiyaa fasaladooda marka ay bilaabayaan waana meesha Kiyotaka is baro fasalka.
Jilayaasha - Fasalka Elite La Sharaxay
Marka hore, waxaan leenahay Kiyotaka Ayanokōji, yaa arday ka ah Dugsiga Sare ee barbaarinta. Waa mid caajis badan oo caadi ah. Laga soo bilaabo POV go'an run ahaantii ma laha sifooyin dabeecad xiiso leh. Waxa kaliya oo si sax ah shaaca looga qaaday qaybta ugu dambeysa ee xilli ciyaareedka 1 in uu soo bandhigo dabeecadaha sociopathic iyo cilmi nafsiga ee habka uu u dhaqmo oo uu u tixgeliyo ardayda ay isku fasalka yihiin. Tani waxay iska caddahay inay isaga ka dhigayso mid aad u xiisa badan, wayna i qabatay markii aan maqlay waxa uu ku yidhi qaybtii u dambaysay. Haddii uu jiro Fasalka Xilliga Elite 2, Kiyotaka hubaal waa ku jiri doonaa.
Taxanahan oo dhan, waxaa jiray xusuusqado joogto ah oo ku saabsan taariikhdiisii ​​hore, halkaas oo ay umuuqato inuu kufashilmay dhaqan xun. Wuxuu ku nuuxnuuxsaday inuu isagu, sida Horikita uu doonayo inuu u gaaro Heerka A. Waxaa la muujiyey inuu doonayo oo keliya inuu adeegsado dadka si ay meesha sare u gaaraan. In kasta oo aanan runtii jeclayn, haddana waxaan u ahay xidid isaga.
Xiga waa Suzune Horikita oo aan moodayay in bilowgiiba ay u adkaysan waayeen. Waxay leedahay dabeecad ku dheggan waxayna u muuqataa inay hoos u dhigto kuwa kale. Uma muuqato in ay saaxiibo badan leedahay, aadna loogama jecla. Iyadu sidoo kale aad bay uga soo horjeedaa bulshada oo inta badan way xaasidnimo ku tahay habka ay dadka kale ula hadasho. Marna lama shaacin sababta ay sidan u tahay. Waxaa laga yaabaa in ay sabab u tahay walaalkeed ka weyn, ma hubo runtii, laakiin dabeecadeeda runtii intaa ma gelin. Horikita hubaal wuu ka soo muuqan doonaa Fasalka Elite.
Iyadu sidoo kale waa munaafiq oo inta badan way ku qoslisaa Kiyotaka sababo nafteeda ku lug leh. Waxay ku majaajilootaa inuu keligii fadhiyo, haddana sidaas oo kale ayay samaysaa? Tani waxay iga dhigtay inaan aad u necbaado dabeecadeeda. Waa wax la yaab leh sida ay u malaynayso in ay tahay in kasta oo ay ku ciyaarto Kiyotaka si kastaba. Waxa uu u isticmaalaa faa'iidooyinkiisa, waa in ay ogolaato si kastaba ha ahaatee.
Markii ugu dambeysay waxaan heysanaa Kikyō Kushida kaasoo muujiya qof aad u diirran, deggan, iyo daryeel leh. Waxay u muuqataa in si wanaagsan looga jecel yahay ardayda isku fasalka ah waxayna muujisaa dabeecad wanaagsan guud ahaan. Xataa qaybta hore, waxay sheegtay in yoolkeeda ugu weyn uu yahay inay saaxiib la noqoto qof kasta oo dugsiga ka tirsan.
Si kastaba ha ahaatee qaybta 3-aad ama 4-aad, waxaa lagu muujiyay inay leedahay dhinac gabi ahaanba ka duwan, shakhsiyadda ay soo bandhigto inta badan waa been abuur. Waa cabsi oo mar kale soo bandhigta sifooyinka sociopathic laakiin ka kaliya ee ogaanaya sirteeda ayaa ah Kiyotaka. Markaas ayay u hanjabtay iyadoo sheegtay inay ku andacoon doonto inuu kufsaday haddii uu sirteeda kashifo. Tani waxay muujinaysaa shakhsiyaddeeda dhabta ah, si kastaba ha ahaatee, waxay ku nacasaysaa qof kasta oo kale marka laga reebo Horikita, oo iska indha tira oo guud ahaan ka fogaada guud ahaan iyada.
Jilayaal-hoosaad - Fasalka Sare ee La Sharaxay
Runtii dhib iguma qabin inta badan jilayaasha taxanaha ah, laakiin qaar waxaan u arkay inay u adkaysan waayeen wada hadalkooda sare u kaca ah, gaar ahaan Manaabu, waxay u ekayd inuu u maleeyay inuu yahay Horatio Kane ka CSI Miami. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jiray jilayaal aad u xiisa badan oo aan aad uga helay sida Chabashira iyo Ryuun.
Nidaamka Dhibcaha Fasalka - Fasalka Kuwa Sare
Codka dhabta ah iyo aasaaska sheekada waxa lagu dejiyay dhamaadka qaybta kowaad. Dhammaan ardayda waxaa la siiyaa tiro dhibcood oo ay ku iibsan karaan dhar, cunto, qalab, iyo isticmaalka kale ee guriga iyo alaabta qaab nololeedka. Qaar ka mid ah kuwan run ahaantii maaha kuwo lama huraan ah. Tusaale ahaan tani waxay noqon kartaa PSP (Waxaan qabaa) kuwee Yamauchi iibsada qaybta koowaad.
Nidaamka Dhibcaha Fasalka - Fasalka Sare ee La Sharaxay
Tani maaha shay uu runtii u baahan yahay weli wuu iibsanayaa. Haddaba muxuu dugsigu u ogolaanayaa inay ardaydu ka iibsadaan alaabtan aan faa'iidada lahayn ee dugsiga? Goorma ayay tahay inay wax bartaan oo ay kor u qaadaan xiisadaha? Sababtu waa sababtoo ah dhammaan waa imtixaan. Haa, waa sax, dhamaadka qaybta kowaad waxa naloo sheegay in dhibcuhu aanay ahayn kuwo aan xadidnayn, (ma aha in loo sheegay inay ahaayeen) iyo in fasal kastaa u baahan yahay inuu helo celcelis sare oo dhibco ah si ay u beddelaan fasallada. .
Ryuuen Wuxuu Xisaabiyaa Dhibcihiisa Fasalka - Fasalka Sare ee La Sharaxay
Hadda, waxa aniga ii xiiso gelinaya ayaa ah in arday kastaa aanu ahayn kan u gudbi kara fasalka xiga haddii uu isagu keeno dhibco ku filan. Taa beddelkeeda dhibcaha ayaa markaa la tiriyaa oo loo soo baxaa celceliska dhibcaha fasallada. Haddaba haddii Fasalka D wuxuu gaaraa celcelis dhibco ka sarreeya marka loo eego aynu nidhaahno Fasalka C, Fasalka D dhaafi doono Fasalka C oo noqda kuwa cusub Fasalka C, halka asalka ah Fasalka C hoos u degi doona oo noqon doona mid cusub Fasalka D.
Isku dhaca & Wadashaqeynta Fasalka - Fasalka Sare ee La Sharaxay
Runtii aad ayaan u jeclahay fikradan sababtoo ah halkii ay ku tiirsanaan lahaayeen jilayaasha shakhsi ahaaneed si ay u qabtaan wax ka sarreeya kuwa kale oo ay u helaan inay ugu sarreeyaan naftooda, u gudbaan fasalada sare ee xawliga iyaga u gaar ah, halkii ay ku hayaan waxqabadka ardayda fasalka. Haddaba maxay tani ka qabataa sheekada iyo sidee ayay u saamaysaa jilayaasha taxanaha?
Markabka Cruise ee ka yimid Fasalka Elite -Fasalka Elite ee La Sharaxay
Hagaag bilawga taxanaha, jilayaasha gudaha Fasalka D (fasalka aan inta badan raacno Anime iyo fasalka taas Kiyotaka waa ku jirtaa), inta badan waxay isku dayaan inay is fahmaan oo isbartaan, halka qaarkood aanay ka fogaan khilaaf iyo iska hor imaad oo ay ku murmaan oo ay is khilaafaan bilawgiiba. Tan waxaan wax badan ku aragnaa Sudo, maadaama uu had iyo jeer la dagaallamo Horikita, inkastoo uu faa'iido u leeyahay fasalka oo ku salaysan xooggiisa iyo geesinimadiisa.
Kiyotaka wuxuu sameeyay heshiis - Classroom Of The Elite Sharaxay
Dhammaan barta celceliska dhibcaha fasalka waa in ay ku khasabto ardayda fasalka inay wada shaqeeyaan. Waa in ay wada shaqeeyaan si aysan u sii joogin meesha ugu hooseysa oo dabcan, ay sii joogaan Fasalka D.
Waa maxay dhibcaha S?
Qofka ugu horreeya ee wax ka ogaada dhibcaha S waa in asal ahaan ay la mid yihiin dhibcaha caadiga ah, kaliya farqiga u dhexeeya waa in siyaabo kala duwan loo helo oo sida caadiga ah lagu daro marka arday ama fasalka uu dhammeeyo hawl ama ardaygu helo dhibco dheeraad ah sababtoo ah Hawshii uu dhammeeyay, ama ka sii muhiimsan, hawsha dheeraadka ah ee uu dhammeeyey. Inta aad daawato Naadi Inta badan nidaamka dhibcaha ayaa macno samayn doona. Asal ahaan waa sida soo socota:
credit: Wiki Fandom
S-Point (Ｓポイント, Esu Pointo): Sidoo kale loo yaqaan S-System (Ｓシステム, Esu Shisutemu) gudaha anime, S-Point waa mid ka mid ah sifooyinka aasaasiga ah ee inta badan gacan ka geysta sharafta Dugsiga Sare ee barbaarinta iyo mustaqbalka rajada leh ee ardaydeeda. Si kastaba ha ahaatee, fikradda nidaamkan weli lama shaacin.
Barta Fasalka (クラスポイント, Kurasu Pointo): Kuwan waxaa si siman loo siiyaa ardayda fasal kasta waxayna ku kala duwan yihiin fasallada, iyadoo ku xidhan waxqabadka fasalka. In kasta oo dhammaan qodobbada xisaabtanka aan weli si cad loo soo bandhigin, hal shay ayaa hubaal ah in ay ku ururaan dadaalka fasalka si loo horumariyo heerka waxbarasho. Intaa waxaa dheer, qiimayaashan waxaa lagu dhawaaqaa dhammaadka bil kasta. Si kastaba ha ahaatee, kiiska dhifka ah ee uu jiro khilaaf u dhexeeya fasallada, dhibcahooda fasalka waa la hayaa oo laga tashanayo. Hal dhibic oo fasalku waxay la mid tahay 100 dhibcood oo gaar ah.
Barta Gaarka ah (プライベートポイント, Puraibēto Pointo): Kuwani waa qiimayaasha tirada la wareejin karo ee arday kastaa haysto kaas oo loo isticmaali karo wax kala iibsiga, ganacsiga ganacsiga, iyo qandaraasyada maadaama ay yihiin kuwo lagu beddeli karo unug lacageed. Qiimaha sidoo kale wuxuu u koraa arday kasta bilawga bil kasta marka loo eego 100 ilaa dhibcaha fasalka ay haystaan ​​fasaladooda; taas oo macnaheedu yahay, haddii fasalku sii wado 1,000 dhibcood oo fasalka ah bisha oo dhan, waxaa la filayaa in arday kasta oo fasalkaas ku jira uu helo 100,000 oo dheeraad ah oo gaar ah bilawga bisha soo socota. Dhibic kastaa waxa uu qiimihiisu yahay 1 yen lacag ahaan.
Barta ilaalinta (プロテクトポイント, Purotekuto PointoQodobbada ilaalintu waxay ku siinayaan xaqa aad u leedahay inaad ka saarto cayrinta. Xataa haddii aad ku dhacayso imtixaan, ilaa iyo inta aad leedahay meel ilaalin ah, waxaad u isticmaali kartaa inaad tirtirto su'aalaha aad qaldatay. Si kastaba ha ahaatee, dhibcahan laguma wareejin karo ardayda dhexdooda.
Imtixaan gaar ah (gaar ahToku別べつ試Ku験Kiin, Tokubetsu Shiken): Imtixaan la qaaday si loo ogaado dhibcaha fasalka ee fasal kasta.
Dhamaadkii Fasalka Aqoonyahanka
Hadda si aad u fahamto meesha uu nidaamka dhibcaha ka yimid iyo sida uu u saameeyay ficillada jilayaasha ee Classroom Of The Elite waa inaad heshaa qaybta ugu dambeysa halkaasoo qallooca ugu weyn uu soo shaac baxay.
4-da fasal ayaa la tijaabiyaa marka loo diro jasiirad fog si ay uga qayb qaataan imtixaankii ugu dambeeyay ee xilli ciyaareedka ugu horeeya Fasalka Elite. 4-ta fasal ayaa loo sheegay in ay kaamamka ka sameystaan ​​meeshii ay doonaan. Mid ka mid ah fasalku wuxuu galay god qarsoodi ah, halka mid kalena uu dejiyo xero ku taal xeebta oo uu leeyahay xaflad inta badan qaybta. Waad helaysaa fikradda. Ujeedada ciyaarta ama imtixaanku waa in la ogaado cidda hogaaminaysa koox kasta.
4-da fasal ee la isugu keeno natiijooyinka - Fasalka Elite-ka waa la Sharaxay
Marka ay ciyaartu bilaabanto fasaladu waa inay dhammaan go'aansadaan cidda noqon doonta hoggaamiyaha kooxdaas. Ku alla kii hogaamiye kooxeed u ah kooxdaas waa inuusan waligiis u muujin kooxaha kale aqoonsigooda. Markaa ujeedadu waa in koox kastaa ogaato cidda hogaaminaysa koox kasta. Waxaa jira khilaaf badan oo u dhexeeya kooxaha, sida Fasalka C wuxuu leeyahay xaflad xeebeed iyo Heerka B soo diray jaajuus si uu uga dhaco nigisyada qaar ka mid ah hablaha ku jira Fasalka D.
Sirdoonka Kiyotaka waa la tusay (mar kale)
Dhammaan waxay u egtahay inay si aad ah ugu socoto fasalka D, ilaa dhamaadka meesha lagu muujiyay taas Fasalka D dhab ahaantii wuu ku guuleystay ciyaarta isagoo helay dhibcaha ugu badan. Waxaas oo dhan waxaa sabab u ah Kiyotaka, kaas oo bilawga ciyaarta ogaanaya inaad bedeli karto hogaamiyaha fasalkaaga haddii aad haysato sabab dhab ah oo wanaagsan. Horikita yaa la go'aamiyay in uu noqdo Hogaamiye Fasalka ayaa ku xanuunsata marka ay u baxdo in ay isku daydo in ay joojiso mid ka mid ah gabdhihii xerada ka dhacayay nigisyada, ugu dambeyntii waxay ku dhacday roobka iyo dabaysha markii ay qabato tuuggii.
Kiyotaka wuxuu daaha ka qaaday inuu ahaa hogaamiyaha intii Horikita - Classroom Of The Elite Explained
Taas aawadeed, Kiyotaka beddelo hoggaamiyaha Fasalka naftiisa, oo cidna uma sheego, xitaa Horikita. Qof kasta oo ka tirsan kooxaha kale dhamaantood waxay u maleynayaan inay tahay Horikita halkii qof kale. Waa maxay sababta ay si kastaba? Horikita waa kan ugu xariifsan, ugu xariifsan uguna madax adag, waxay macno fiican samaynaysaa inay iyada noqoto.
Salaan kama dambays ah - Fasalka Elite waa la sharaxay
Anime The Fasalka Elite wuxuu ahaa Anime weyn oo hubaal ah ayaa dareenkayga soo jiitay. Waxaan jeclaa qaybta hore waana sababta aan u sii waday daawashada ilaa dhamaadka. Dhibaatadu runtii waa taas Fasalka Elite waxaa looga tagay dhamaad aan la soo koobi karin. Ma aanan helin inaan aragno imtixaanka soo socda ee fasal walba uu mari doono, waxaana hubaal ah inaanan wax badan arag. Kiyotaka's qudbad yar oo uu jeediyay dhamaadkii qeybta markii uu ka fikirayay Horikita iyo sida aysan dhab ahaan saaxiib u ahayn, weligaa ha ka welwelin saaxiib.
Horikita, Kushida iyo Kiyotaka ayaa wada qaadaya wiishka - Fasalka Kuwa Sare ayaa Sharaxay
Hadaad rabto a Fasalka Elite Season 2 markaa fadlan ka fiirso akhrinta maqaalkeena hore ee ku saabsan Anime halkan, halkaas oo aan ka gudubno haddii ay jirto weli content in la waafajiyo, goorta ay sii deyn lahayd, sababta ay u badan tahay iyo in ka badan. Haddii aad jeclayd akhrinta maqaalkan, fadlan ka fiirso inaad u heesto liiskayaga boostada ee hoose si aadan waligaa u seegin wax cusub markaan daabacno maqaal cusub oo kan oo kale ah. Waad ku mahadsan tahay akhriska, nabad qabo oo maalin wanaagsan.
Isku qor liiskayaga boostada ee hoose.
Iibso Badeecada Muuqaalka Cradle si ay u taageerto goobta iyo abuuryaasheeda.
Boorsada CVS Cas Samurai
Ku dar gawaarida
Shaati CVS Dusk Demin Shaati Gacmo Dheer.
Ragga Classic CVS ​​Hannya Demon Shirt [Naqshadda hore kaliya]
Sale Alaab iib ah
CVS Red Samurai Design T-Shirt [Hor kaliya]
Waxaan maqaallo u qoraa boggaga sida cradleview.net waxaad igala soo xiriiri kartaa iimayl ahaan: inquiries@cradleview.net Hubi inaad tixraacgaaga u dhigto "Dima", aad bay muhiim u tahay. Waa inaan bixiyaa aragti daacad ah oo cadaalad ah dhammaan mawduucyada aan ka hadlo oo aan dib u eego. Caadi ahaan waxaan isku dayaa in aan maskaxdayda ku hadlo iyada oo aan shaandhayn lahayn tanina waa habka aan doorbiday ee hadalka. Waxaan rajaynayaa inaad tan fahmi karto oo aad xisaabta ku darsan karto markaad akhrinayso maqaalladayda. Waxaad igala soo xiriiri kartaa Instagram: @cradleview sidoo kale waxaan ku firfircoonahay YouTube-ka anigoo isticmaalaya kanaalka Cradle View. Waxaan kaa caawiyaa inaad fiidiyooyo cusub soo geliso kanaalkaas mar kasta oo aan awoodo, markaa iska hubi inaad iska hubiso, waxay aniga iyo goobta wax badan ka caawin lahayd haddii aad awooddo. Haddii aad jeclaan lahayd inaad i caawiso iyo goobta, had iyo jeer wax ku deeqi kartaa goobtan iyo naftayda. Ilaa aan ka sameeyo bogga Patreon ee shakhsi ahaan loo maareeyo ikhtiyaarka ugu fiican ayaa ah in aan ku tabaruco iyada oo loo marayo: cradleview.net/donations Aad bay ii caawin lahayd haddii aad ku tabarucdo goobtan. Dhammaan deeqaha goobta waxa lagu kharash garayn doonaa si waafaqsan iyo wax kasta oo ku xidhan goobta iyo wax kasta oo hoosaadyada la xidhiidha Cradle View, si rasmi ah cradleview.netU fiirso dhammaan qoraalada Dima
Daawo Zara Mcdermott Oo Ku Dhawaad ​​Qaawanaansho Iyo Jacaylka Lilly Photoshoot
Amagi Brilliant Park Page
Gelitaan Hore Kiyotaka Ayanokōji - Xogta Dabeecada
Gelitaanka Xiga Muuqaalada Sexy Cosplay ugu Wanaagsan